> Resource > Mac > Sidee inuu ka soo kabsado Digital Camera Photo on Mac
Sidee ayaan u soo kaban karto, Digital Camera tirtiray Photo on Mac?
Waxaan leeyahay Kodak kamerad digital ah. Sababaha qaar ka mid ah, oo dhan photos aan camera digital ayaa laga saaray, taasoo aanan anigu ku kaydsan aan Mac weli. Waxaan halkan waydiistaan ​​caawinaad inuu ka soo kabsado camera digital tirtiray sawir ku Mac. Waan ogahay waa in xal qaar ka mid ah.
Images si fudud looga saari karaa ama la tirtiro ka camera digital sababo kala duwan sida tirtirka shil ah, inflection virus, ay ka saareen aan habboonayn ee kaadhka xusuusta. Sidee si ay u xaliyaan arrintan? Waxa aad u baahan tahay in aad maskaxda ku hayso marka hore waa in jirin file tirtiray in aad camera digital si joogto ah baabi'i doontaa ilaa iyo inta aan ka overwritten by xog cusub. Sidaas, awoodda aad camera digital iyo qaataan kaadhka xusuusta ay si deg deg ah. Markaas waxaad ka heli kartaa barnaamij Mac digital camera soo kabashada sawir inuu ka soo kabsado aad sawiro lumay fudayd.
Wondershare The cusub Data Recovery for Mac waxaa loogu tala galay inuu ka soo kabsado wax kasta oo ka camera digital on Mac, oo ay ku jiraan sawirrada, Cajalado, iyo videos. Arrinta No photos waxaa tirtiray, formatted ama xitaa ku kharribeen, barnaamijkan waa ay awoodaan in ay ku caawiyaan. Waxaad ka heli kartaa hoos ku version tijaabo ah Wondershare Data Recovery ah Mac. Version maxkamad Tani waxay aad u saamaxaaya in ay baarista camera digital ama kaadhka xusuusta ay.
Hadda aynu ku dhex socdo dib u soo kabashada digital camera sawir Mac in qaar ka mid ah qasabno fudud. Dadka isticmaala Windows fadlan kala soo bixi ku version Windows ee Wondershare Data Recovery .
Talaabooyinka inuu ka soo kabsado Digital Camera Photo on Mac
Tallaabada 1 Connect Your Digital Camera Memory Card si aad Mac iyo Burcad Barnaamijka
Orod Wondershare Data Recovery for Mac oo aad arki doonaa suuqa kala bilowga ah sida hoos ku qoran. Waxaad u baahan tahay oo keliya in aad doorato mid ka mid ah hab-kabashada si ay u bilaabaan dib u soo kabashada. Halkan aynu dooro "lumay Recovery File".
Tallaabada 2 Scan Khasaaray Photos on Your Camera Digital Memory Card
Halkan waxa aad u baahan tahay oo kaliya in la muujiyo warqad drive aad kaadhka xusuusta camera digital oo guji "Scan" si ay u bilaabaan iskaanka sawiro laga badiyay. Fadlan dooro "Photo" ee File Nooca ikhtiyaarka Select.
Fiiro gaar ah: Haddii aad sawiro camera digital lumay, maxaa yeelay formatting card, waxa kale oo aad dooran kartaa "Enable Deep Scan" doorasho.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan Digital Camera Photo on Mac
Waxaad arki doonaa dhammaan sawiro laga helay aad kaadhka xusuusta camera digital wax yar ka dib markii baaris ah. Waxaad dooran kartaa ka fayl asalka ah oo ka mid ah sawirrada lumay bidixda ee suuqa si ay u eegaan wax ku sawiro helay. Dooro kuwa sawiro aad doonaysid in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" button dhammayn soo kabashada.
Waxaad u baahan doontaa in ay doortaan gal ah oo aad xajisaan photos soo kabsaday. Fadlan dooro meel aad Mac iyaga badbaadiya.